Shiinaha koollada dhalaalaya Hot Factory, CE, Soosaarayaasha - Tiknoolajiyadda Daarista (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga >Alaabta >Koollo dhalaalid kulul
Automotive gudaha xabagta dhalaali kulul kulul
Nadiifiyahayaga gawaadhida dhalaalaya ee loo yaqaan 'Automotive aluminium' waa xabag cadaadis xasaasi ah oo ur leh oo leh dabacsanaan sare iyo nafwaaji sare. Waxaa naga go'an inaan siino tayo sare oo dhalaal kulul, oo leh qaab dhismeed deggan iyo gaarsiinta waqtigeeda Waxaan ku guuleysannay kalsoonida macaamiisheenna suuqyada ASEAN iyo EU.
Koollo kulul oo dhalaalaya kululaynta PE Courier Bag Bag
Nadiifinta Nalalka Kulul ee loo yaqaan 'PE Courier Bag Sealing' waa shay aan lahayn ur polyolefin cadaadis-xasaasi ah, oo leh astaamo taakulo wanaagsan oo bilow ah, awood xoog leh, iyo heerkul hooseeya oo aan lahayn wax taako ah. Kooladaha dhalaalka kulul ayaa si wanaagsan loogu iibiyay ASEAN, EU iyo suuqyada kale sanado badan, waxaana si qotodheer u aaminsan oo ay taageerayaan macaamiisha.
Wax xuub xuub-biyood ah oo xabag ah
Xuubkeena xuubka biyuhu xabagta kulul ee dhalaalka kulul wuxuu leeyahay iska caabin aad u qabow, waxyeelo iyo guryaha gabowga. Kooladaha dhalaalka kulul ayaa si wanaagsan loogu iibiyay ASEAN, EU iyo suuqyada kale sanado badan, waxaana si qotodheer u aaminsan oo ay taageerayaan macaamiisha.